Ahoana no hahatongavanao amin'ny tenanao: Torohevitra 5 ho tena izy, tena izy ary tsy sandoka - Blog
Ahoana no hahatongavanao amin'ny tenanao: Torohevitra 5 ho tena izy, tena izy ary tsy sandoka
Tsy mbola mora kokoa ny nanao ‘sandoka’ noho ny ankehitriny.
Miaraka amin'ny kolontsainay 'selfie' sy ireo sehatra media sosialy izay mamporisika anay haneho ny tena tsara indrindra - matetika Photoshopping - ny tenantsika amin'izao tontolo izao, dia mora tokoa ny mamorona sary izay lavitra ny tena maha-izy anao.
Mitombo ny fitiavam-bola amin'ny fahazoana ‘mpanaraka’ sy ny fahafaham-po amin'ny fahazoana ‘tian’.
Ny ady tsy tapaka ho an'ny fampirantiana sy ny fiheverana, omena ny filan'io fihazakazahana endorphin mampihetsi-po io rehefa mahazo valiny mampahery, tsara ary mazoto ianao, dia mety hahatsapa ho toy ny asa manontolo andro.
Izany ezaka rehetra izany dia miankina amin'ny fahamendrehana ihany amin'ny farany.
Io olona io ve no ‘tena’ anao?
Mahazo izany valinteny rehetra izany ve ianao raha maneho ny toetranao taloha taloha, izay tsy sambatra noho ny rehefa misavoana any amin'ny PJs, manaram-po amin'ny hazakazaka marathon?
Fa ny resaka tena maha izy azy sy tena izy dia tsy voafetra fotsiny amin'ny sary kasainao hataon'ny Insta na Snapchat…
… Ahoana ny amin'ilay sary tianao haseho amin'ny namanao sy ny mpiara-miasa aminao?
Mahita ny ‘tena’ anao ve izy ireo?
ahoana no hahalalanao fa ao aminao izy
Na angamba te-hanolotra persona hafa ianao arakaraka ny orinasa misy anao, mandray am-pahalalana fahaizana toy ny chameleon mba hahafahanao miditra na aiza na aiza misy anao ary iza no miaraka aminao.
Amin'ny lafiny iray dia miafina ao ambadiky ny lafika kely isika rehetra, mamolavola kinovan'ny tenantsika izay heverinay fa ny hafa te-hahita sy hanafina ny tena maha-izy azy.
Misy antony lehibe mahatonga an'izany. Araka ny fahitan'ny mpanoratra aingam-panahy Janet Louise Stephenson:
Ny fahamendrehana dia mitaky fepetra malemy, mangarahara ary tsy mivadika.
Ary ny olana dia ny ankamaroantsika tsy mahazo aina amin'ny marefo na mangarahara ary vonona hanao sorona mivadika eo amin'ny alitaran'ny fiarovan-tena.
Azonao atao ny manao ‘sarontava’ hiarovan-tena noho ny a tahotra holavina na mety matahotra ianao sao tsy mifanaraka amin'ny toe-javatra manokana na amin'ny fomba ahoana ny tena tenanao tsy ampy tsara .
Ka izao no zavatra… raha te ho marina, ilaina ny mampivelatra ny herimpo hanehoana ny tsy fahalavorariantsika ary ho mora tohina, ho be herim-po hamela ilay olona heverintsika fa tokony ho izy ary handray am-pahavitrihana ny tena toetrantsika.
Azo antoka fa misy fotoana mety mahasoa ny mampifanaraka ny toetranao amin'ny tontolo iainanao, saingy ny loza dia miova amin'ny fanovana tanteraka ny toetranao ka tsy hifandraisanao amin'ny tena toetranao.
Raha tokony ho ianao dia asehonao amin'ny maha olona heverinao fa ho malaza sy ankafizin'ny olona manodidina anao ny tenanao.
Ny olana dia ny olombelona olona manam-pahaizana be ary afaka mahita sary hosoka mora foana.
Raha tsikaritry ny olona fa tsy marina ianao, dia mety hiaina ilay fandavana izay natahoranao voalohany.
Ny ezaka ataonao mba hahatonga azy ireo ho malaza dia mety hisy vokany mifanohitra amin'izany.
Araky ny fomba fiteny ankehitriny:
Misy ny olona tena misy ny olona tsara ny olona sasany sandoka. Ary ny olona sasany dia tena mahay misandoka.
Arakaraka ny ahitantsika ny tenantsika voahodidin'ny tsy fahamarinan-toerana dia vao mainka tsara kokoa ny radarantsika amin'ny famoahana fakery, ka tsy isalasalana fa ho hita tampoka ianao.
Ary voamarikao ve fa tsy misy mifameno ireo teny ampiasaina hilazana ny olona tsy marina?
Ireto misy vitsivitsy fotsiny: pseudo, sandoka, phony, disingenuous, tsy tso-po, be hambom-po, voa, bogosy…
namela ahy ho an'ny vehivavy hafa ny vadiko taorian'ny 30 taona
Tsy lisitra mialoha be loatra, sa tsy izany? Tsy teny tsara eo amin'izy ireo.
Mahatsapa ho mahazo aina sy hajaina kokoa isika rehetra rehefa voahodidin'ny olon-kafa izay tenany fa tsy milalao lalao amin'ny maha-kinova faharoa azy.
Toa izany, ny torohevitra tsara indrindra dia ny tsy hanakalo ny tena maha-azo anao anao hahazoana fankatoavana, na manao ahoana na manao ahoana fakam-panahy izany.
Raha tsapanao fa ianao no mpandraharaha faratampony amin'ny fampifanarahana ny toetranao araka ny toe-javatra dia mety efa nahatsikaritra ianao fa misy fiatraikany amin'ny fisakaizanao sy ny fifandraisanao izany.
Ny vaovao tsara dia misy teknika azonao ampiasaina hanampiana anao hanana ny tenanao, na dia ao anatin'ireo toe-javatra tsy mahazo aina na sarotra aza, izay misy fiovana haingana dia haingana toa ny safidy tianao indrindra.
Toy ny ankamaroan'ny zavatra, mila miasa ianao amin'ny famerenana mandinika ny valinteninao mandeha ho azy, fa ny valiny amin'ny fanajana tena dia mendrika ezaka.
Fomba 5 hahatongavanao
1. Ny fanatsarana tena dia mitaky fahatsiarovan-tena.
Ny dia mankany amin'ny kinova tena marina sy marina kokoa an'ny tenanao dia tsy maintsy atomboka amin'ny famakafakana tena, satria ny fahalalana ny tena sy ny fahatsiarovan-tena no lakilen'ny 'tena izy.'
Makà fotoana fantaro ny tenanao amin'ny ambaratonga lalina dia dingana lehibe.
Raha te hiaina ny fiainanao manokana ianao fa tsy andiany sandoka an'ny olon-kafa, tena ilaina ny mahatakatra ny soatoavinao manokana.
Zava-dehibe ny fahatsiarovan-tena fa amin'ny maha-zaza antsika, ary rehefa mihalehibe koa isika, dia mandray ny fomba fijery sy ny hevitr'ireo izay mitaona antsika - ray aman-dreny, mpampianatra, namana, sns.
Tsikelikely, lasa antsika ny soatoavin'izy ireo ary ampahany lehibe amin'ny rafi-pinoantsika manokana.
Ny fahatsiarovan-tena dia mitaky fanombanana ireo soatoavina sy finoana azo ireo ary ny fahitana raha marina amin'ny tenantsika izy ireo, na raha, raha ny tena izy, dia efa lany andro na tsy mipetraka intsony miaraka amin'ny olon-dehibe lasa olon-dehibe intsony isika.
Ohatra, mety nihalehibe ianao tamina tontolo iray izay tsy nanajana ny finoana hafa, noho izany dia nitazona izany toerana izany ianao.
Mety hoe ny fahamatorana no nanova ny fomba fijerinao momba an'io olana io ary tsy anao intsony ny fijerin'ny fianakavianao.
Raha izany no izy, dia raha marina ny tenanao, dia mila mandray azy ianao ary miaiky ny zonao amin'ny hevitrao manokana.
Aza adino anefa fa mety miova koa ireo hevitra ireo rehefa mandeha ny fotoana. Ny fahatsiarovan-tena dia dingana mitohy mandritra ny fiainanao.
Inona no atao hoe fiheveran-tena ary misy akony eo amin'ny fiainanao izany?
Ahoana no hahitanao ny tenanao: Fomba 11 hahitana ny tena toetranao
Inona no fisaintsainana samirery ary nahoana no tena zava-dehibe izany?
2. Diniho ny fanaovan-gazety.
Ny fahitana zavatra amin'ny loko mainty sy fotsy, ary na dia ny fizotran'ny fametrahana ny eritreritra an-tsoratra aza, dia fomba iray lehibe hahitana ilay 'tena' anao.
Ny fandaniana fotoana hanoratana lisitr'ireo zavatra izay tena manan-danja aminao - ary izay miresaka amin'ny fanahinao - dia mety hampiharihary.
Rehefa manoratra ianao dia ho afaka hanazava tsikelikely ny soatoavinao fototra.
Ny fisafidianana ny hanoratra diary dia fanoloran-tena lehibe, fa ny fitandremana ny eritreritrao rehefa mivoatra izy ireo dia midika fa afaka mijery any aoriana ianao ary misaintsaina ny dia.
Fitsangantsanganana dia afaka manampy amin'ny famaritana fironana sy lamina mety tsy manampy ihany koa eo amin'ny fiainanao, izay mety hahitanao ny tenanao mihatakataka lavitra ny tena ‘tena’ anao.
maninona no mitranga amiko ny zava-drehetra
Izany dia manome anao fotoana hamerenana ny tenanao amin'ny làlana tsara kokoa.
3. Mandà ny fahalavorariana.
Fa maninona no hataoko izany, mety hanontany ianao.
Azo antoka fa zavatra tsara kendrena ny fahalavorariana?
Eny, izany dia satria ny fahalavorariana dia tsy azo tanterahina ary tsy azo tratrarina, na inona na inona ezaka ataonao mba hanatanterahana azy.
Ny tena izy dia amin'ny fiezahana ho tonga lafatra fotsiny, mba hanehoana ny kinova tena mety amin'ny tenanao, dia misavoritaka ianao.
Raha tokony hikendry ny tonga lafatra dia maninona raha mianatra raiso ny tsy fahalavorarianao .
Eny, izany dia mitaky singa iray marefo, fa ny fanekena ny fangirifiriana sy ny fahalemena dia manan-danja toy ny fanekena ny tanjakao raha ny tena fahamendrehana no resahina.
Ny fananana herim-po handavana ny persona tonga lafatra dia heverintsika fa tokony hamolavola sy hampiseho ny tena loko marina dia manome hery amin'ny farany.
4. Mitadiava fifandraisana tena izy.
Ny maha-olombelona antsika dia ny fifandraisana mahazatra eo amintsika rehetra, saingy misy karazan'olona, ​​finoana ary fitondran-tena marobe any.
Raha te hanana fifandraisana marina sy feno fanahy, dia mila miezaka ny hahatakatra marina ireo manodidina anao ianao.
Ny fametrahana fanontaniana feno fieritreretana sy fihainoana tsara ny valintenin'izy ireo dia hanampy anao hanana fifandraisana lalindalina kokoa sy mahafa-po amin'ireo olona manodidina anao.
tsy hainy izay tadiaviny
Ireo fifandraisana misy heviny ireo dia hanampy anao hahafantatra ny tena maha-izy anao.
Aza hadino ny manilika ireo olona izay tsy mitovy amin'ny anao ny rafitra manome lanja. Mandany fotoana miaraka amin'izy ireo ary manova endrika hatrany ny toetranao manokana mba hahafahanao miditra dia mandà ny fahafahanao manokana ho marina.
Azonao atao, ohatra, ny mahita ny tenanao ao anatin'ny vondrona mpiara-mianatra izay faritana amin'ny fomba fitondran-tenany na ny fomba fitafiny.
Mialà sasatra kely amin'ny saina ary diniho raha tena io ianao na raha toa ianao ka manao karazana hetsika hampifaly ireo manodidina anao mba hahazoana antoka fa anisan'ny vahoaka ‘in’ ianao.
Io no ilana ny dingan'ny famaritana ny soatoavinao manokana (teboka 1 etsy ambony).
Raha vantany vao fantatrao ny toerana misy anao dia ho mora kokoa ny mahita fa tsy mifanaraka amin'ireo olona ireo fotsiny ianao.
Mety ho hitanao fa misolelaka ao amin'ny orinasan-dry zareo mihitsy aza. Ity no famantarana anao amin'ny fivoahana, ny fahafahanao manidina ny tsy fahatokisana, mba hahafahanao ho marina amin'ny tenanao.
5. Ataovy ‘amin’ izao fotoana izao. ’
Andao hatrehana izany, meloka isika rehetra amin'ny famelana ny saintsika hivezivezy amin'ny lohahevitra rehefa eo am-piresahana.
Voatsindry mafy ny fiainantsika, tsy dia mahagaga raha tonga ao an-tsaintsika ny eritreritra izay handrahoana sakafo hariva na zavatra hafa ao amin'ny lisitry ny zavatra tokony hataonao.
Na mety mieritreritra valiny lehibe fotsiny ianao amin'ilay teboka nolazaina.
Na izany na tsy izany dia tsy teo ianao 'nandritra ny ankamaroan'ny fotoana ary mety ho efa nahazo ny votoatin'ny zavatra voalaza fotsiny.
Mazava ho azy, rehefa vita ny lahateniny dia mamaly haingana ianao - antenaina fa mety.
Ny olana dia afaka mahatsapa am-pahavitrihana ny olona raha tena mifantoka amin'izay lazainy ny sain'ny hafa.
Niampy an'izay, mety tsy mety ny valinteninao, manambara ny tsy firaharahianao.
Raha te hanana ny tena marina eo amin'ny fifandraisanao sy ny fifandraisanao hafa ianao dia tokony hampihatra a karazana fihainoana antsoina hoe 'fihainoana mavitrika'.
Ity dia fahaiza-manao manokana, fa ny dingana fototra dia: ny fandinihana tsara mampiseho fa mihaino ianao amin'ny alàlan'ny fampiasana tenim-batana sahaza manome valin-teny mampihemotra ny fitsarana ary mijanona amin'ny fanelingelenana mamaly araka ny tokony ho izy.
ahoana no ahafantarana raha misy milalao saina
Misy fotoana ve azo ekena fa tsy marina?
Nolazaiko tetsy ambony fa misy ny toe-javatra mety ilana fanovana endrika manokana ary ekena amin'ny lafiny sasany.
Ny ohatra tsara dia eo amin'ny sehatry ny asa raha mety ny hevitra tsara hanehoana fifanarahana amin'ny mpiara-miasa, na indrindra ny ambony, amin'ny teboka izay tsy mipetraka tsara aminao.
Ity dia ampahany amin'ny lalao mety ilainao hilalao ao anatin'ny tontolon'ny orinasa.
Raha hitanao io lamina io dia averimberina matetika, na izany aza dia hanomboka handray ny vokany ny tsy fihatsarambelatsihy.
Satria ny hoe 'tena izy' dia midika hoe mitazona ny fihetsikao sy ny teny mifanaraka amin'ny soatoavinao, mety ho avy ny fotoana, raha te-ho marina amin'ny tenanao ianao, dia mila miteny ianao fa ampy dia miroso ho an'ny fahamendrehanao manokana.
Ianao irery no hahalala hoe tonga ny fotoana.
Ny fitazonana ny fahatsiarovan-tena eny an-dàlana, araka ny voalaza tetsy ambony, dia hiantoka fa tsy terena ho olona iray ianao tsy elaela noho ny tena ilaina tanteraka.
Raha fintino izany rehetra izany.
Ao amin'ny fiaraha-monina tarihan'ny mpanjifa, variana amin'ny zavatra ara-nofo ary atosiky ny faniriana hamolavola endrika fahalavorariana na amin'ny Internet na amin'ny tena izy, dia tsy mbola sarotra kokoa ny tena marina.
Tsara anefa ny mahatadidy fa tsy ny fananana na ny sary Photoshopping no mamaritra anao, fa ny toetranao voajanahary sy ny toetranao.
Amin'ny fananana herim-po ampy handraisana fepetra mba hampisehoanao amin'izao tontolo izao ny tena maha-izy anao dia azonao atao ny manamafy ny maha-izy anao sy fanatrehana tokana eto amin'izao tontolo izao , mba hahafahanao miavaka amin'ny vahoaka.
Avelako ho an'ny filozofa Friedrich Nietzsche ny teny farany satria nataony tsara lavitra noho ny azoko natao izany:
Ilay olona dia voatery nitolona foana mba tsy ho resin'ny foko. Raha manandrana izany ianao dia ho irery matetika ary matahotra. Saingy tsy misy vidiny lafo loatra handoavana ny tombony anananao.
maninona no tiako ny lehilahy manambady
mila olona reharehako fotsiny aho
ny fomba hiatrehana ny toe-tsaina mendrika
rehefa misy empaths roa mifankatia
ny fomba hiatrehana ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny fifandraisana